अमेरीकन जर्नी – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१३ मंसिर २०७७, शनिबार १६:३७ English
अमेरिकाको लस एन्जलसमा प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाहरुको घोषणा १३ मंसिर २०७७, शनिबार १४:३८
लन्डन । कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अमेरिकी नागरिकहरूले पहिलो पटक डिसेम्बर दोस्रो साता नै पाउने भएका छन । अमेरिकाको कोरोना भाइरस खोप कार्यक्रमका प्रमुख डाक्टर मोन्सेफ स्लावीले डिसेम्बर महिनाको ११ तारिखसम्ममा अमेरिकी नागरिकले खोप पाउने बताएका हुन् । उनले सीएनएनसँगको कुराकानीमा..
आइओटा आँधीका कारण मध्य अमेरिकामा ३० भन्दा बढीको मृत्यु ४ मंसिर २०७७, बिहीबार १४:५७
सान साल्भाडोर । मध्य अमेरिकी क्षेत्रमा आएको आइओटा नामक आँधीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बिहीबार ३० पुगेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय आँधी व्यवस्थापन केन्द्रले जानकारी गराएको छ । गत सोमबार आएको ‘पाँचौँ श्रेणी’को विनासकारी आँधीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३० पुगेको..
अमेरिकामा धुमधाम मनाइयो तिहार, देउसीभैलो भर्चुअल २ मंसिर २०७७, मंगलवार ११:१८
न्यूयोर्क । कोरोना महामारीको महा(प्रभावमा परेको अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपालीहरुले यमपञ्चकको पाँचौं दिन चाड भाइटीका मनाएका छन् । अमेरिकाका ५० वटै राज्यहरुमा कोरोना संक्रमण अझ द्रुतगतिमा व्यापक हुँदै गएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अधिकांश राज्यहरुमा नेपालीहरुले बिगत बर्षहरुमा..
‘कानूनलाई विश्लेषणात्मक होइन, लेख्य आधारमै व्याख्या गरिनुपर्छ’ २६ आश्विन २०७७, सोमबार ०९:५८
न्यूयोर्क । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश एमी कोनी ब्यारेटले कानूनको व्याख्या जसरी लेखिएको छ त्यसरी नै हुनुपर्ने बताएकी छन् । कानूनलाई त्यसको विश्लेषणात्मक नभई लेख्य आधारमै व्याख्या गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले सिनेटमा हुने सुनुवाईमा..
नोभेम्बर पहिलो साता भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन वितरण तयारी पूरा गर्न ट्रम्प प्रशासनको निर्देशन १८ भाद्र २०७७, बिहीबार १३:२२
वाशिंगटन । अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा विभागले नोभेम्बर १ सम्म भ्याक्सिन वितरणका लागि तयारी पूरा गर्न सबै राज्यलाई पत्राचार गरेको छ । राज्यका गभर्नरहरुलाई पठाइएको पत्रमा भ्याक्सिन वितरण केन्द्रहरुलाई नोभेम्बर १ अगाडि नै स्वीकृति प्रदान गर्न भनिएको छ । राष्ट्रपति चुनावको..
ट्रम्पले नियमित पत्रकार सम्मेलन गरिरहेका बेला ह्वाइट हाउस नजिकै गोली चल्यो २७ श्रावण २०७७, मंगलवार १०:००
न्यूयोर्क । अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउस नजिकै गोली चलेको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नियमित पत्रकार सम्मेलन गरिरहेको समयमा गोली चलेको हो । गोली चलेपछि ट्रम्पले गरिरहेको पत्रकार सम्मेलन केही समय प्रभावित समेत भएको छ । गुप्तचर निकायका एजेन्टले विशेष जानकारी..
काम गुमाएकाहरुलाई अतिरिक्त ४ सय डलर दिने राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकारी आदेश २६ श्रावण २०७७, सोमबार ०६:०८
वाशिंगटन । काम गुमाएकाहरुलाई अतिरिक्त ४ सय डलर दिने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेश कार्यान्वयनका लागि राज्यका गभर्नरहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । राज्यका अवस्थीत प्रणालीहरुका साथसाथमा साप्ताहिक ४ सय प्रदान गर्ने प्रणाली समेत सेटअप गर्न निर्देशन दिइएको हो । कम्तीमा १..
तेक्वाण्दो खेलाडी राजु नगरकोटीलाई अमेरिकामा स्वर्ण पदक २३ श्रावण २०७७, शुक्रबार ०७:२१
फ्लोरिडा । अमेरिकाको फ्लोरिडामा गत अगष्ट १ र २ तारिखमा सम्पन्न ‘२०२० फ्लोरिडा ओपन इन्टरनेशनल अनलाइन प्रोम्से च्याम्पियनशिप’मा नेपालका तेक्वाण्दो खेलाडी राजु नगरकोटीले स्वर्ण पदक जितेका छन् । संसारभरका बिभिन्न उमेर समुहका खेलाडीहरु बीच गराइएको प्रोम्से स्पर्धामा “नेपाल..
चीनिया शंकास्पद प्याकेट मेल मार्फत आएपछि अमेरिकन समाज आश्चर्यचकित १८ श्रावण २०७७, आईतवार ०१:४३
वाशिंगटन । अमेरिकाको अधिकांस राज्यमा चीनिया शंकास्पद प्याकेट मेल मार्फत घर-घरमा आएपछि युनाइटेड पोस्टल सर्भिस र सरकार आश्चर्यमा परेको छ । आफुले अर्डर नै नगरेको प्याकेट मेल मार्फत घर-घरमा आइपुगेपछि स्थानियले प्रशासनलाई जानकारी गराएका थिए । चीनबाट आएका प्याकेटहरुमा फलफूल एवं..
अमेरिकामा एकैदिन एक हजार ५९२ को मृत्यु १४ श्रावण २०७७, बुधबार २२:०१
१४ साउन, (एएफपी) । अमेरिकामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको. कारण मङ्गलबार एकै दिनमा १ हजार ५९२ जनाको मृत्यु भएको जोन्स हप्किन्स् विश्वविद्यायले जानकारी दिएको छ । गत २४ घण्टामा कोरोना भाइरसका कारण भएको यो मानवीय क्षति गएको साढे दुई महिना यताको नै सबैभन्दा बढी भएको जनाइएको छ । स्थानीय..
अमेरिकाको टेक्सासमा नेपाली मुलकी अस्मिता खनालको डुंगाबाट खसेर मृत्यु १३ श्रावण २०७७, मंगलवार ०९:२८
टेक्सास । अमेरिकाको टेक्सासस्थित अर्भिङ्की २३ वर्षीया नेपाली मुलकी अस्मिता खनालको गत २६ तारिक आइतबार बोटिङ् गर्ने क्रममा डुंगाबाट खसेर तालमा डुबी मृत्यु भएको छ । टेक्सास राज्यस्थित लुइभिल लेकमा उनी सहित ७ जना साथीहरु छुट्टी मनाउन जाँदा उक्त घटना घटी उनको मृत्‍यु भएको हो ।लुइभिल..
अमेरिकामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या कट्यो ४० लाख १० श्रावण २०७७, शनिबार ०१:५०
लस-एन्जलस । कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वभर ६ लाख ३३ हजार ६ सय ५६ मानिसको ज्यान गई सकेको छ । १ करोड ५५ लाख २६ हजार मानिस विश्वभरमा संक्रमित भई सकेका छन् । यो महामारीबाट १ सय ८८ देश प्रभावित छन् । यो आँकडा जोन हप्किन्स युनिभर्सिटीको सबैभन्दा पछिल्लो आँकडा हो । हाल देखिएको तथ्यांक यस्तो..